DEG DEG: Dayuurad ay leedahay Ethiopian Airlines oo burburtay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DEG DEG: Dayuurad ay leedahay Ethiopian Airlines oo burburtay
DEG DEG: Dayuurad ay leedahay Ethiopian Airlines oo burburtay
(Addis Abeba) 10 Maarso 2019 – Duullimaad ay samaynaysay Ethiopian Airlines oo u kala gooshayey Addis Ababa iyo Nairobi, ayaa burburay, sida uu xaqiijiyey xafiiska RW Itoobiya.
“Xafiiska RW, oo ku hadlaya codka dowladda iyo dadka Itoobiya, wuxuu jeclaan lahaa inuu soo bandhigo tacsida ugu qotada dheer, gaar mid ku jeedda dadka ay eheladoodii ku dhinteen shilka dayuuradda Ethiopian Airlines Boeing 737 oo saaka samaynaysay duullimaad joogto ah oo isku xira Addis iyo,” ayaa lagu qoray war kasoo baxay xafiiska Abiy Ahmed oo la dhigay Twitter.
Sababta iyo goobta shilka, tirada rakaabkii saarnaa dayuuradda iyo inta dhimatay ayaan weli war saaxi ah laga haynin.
Afhayeen u hadlay dayuuraddan oo ay gebi ahaanba wada leedahay dowladda Itoobiya ayaa siddey 149 rakaab ah iyo 8 shaqaale ah, markii ay dhacaysey.
Previous articleFaahfaahin ku saabsan howlgallo habeen dheelmad ah oo laga fuliyay deegaano dhowr ah oo Al-Shabaab maamulayeen
Next articleWefdi ka socda QM iyo Midowga Afrika oo Muqdisho u jooga arrin muhim u ah amaanka Somalia